* Light Of Myanmar *: လိမ်ညာဝါဒဖြန့်ချင်းသည် အကျိုးမရှိပါ
Posted by * In Search of Truth * at 9:07 PM
သတင်းအမှားတွေကြောင့်ပြည်သူတွေ ဒုတ်ခရောက်နိုင်တယ်ဆိုတာ တင်တဲ့သူတွေ မသိဘူးဗျ။သူတို့တွေမှာ စဉ်းစားဥာဏ်ရှိမှ အဲဒီဓာတ်ပုံက ဟုတ်မဟုတ် စဉ်းစားတတ်မှာပေါ့။သူတို့တွေက ဟုတ်တာတွေရော၊မဟုတ်တာတွေရော စွတ်တင်နေတာ။ကျွန်တော်လည်း အကို့လိုပဲ ရေးမလို့..လက်မရဲသေးလို့ဗျ။။ဟဲဟဲ။အခုအချိန်မှာ စစ်တပ်ကိုမှ မဆဲရင် စစ်တပ်လူလို့ထင်ကြတယ်ဗျ။မှန်ကန်တဲ့ သုံးသပ်ချက်တွေကို အမြဲအားပေးနေမယ်ဗျာ။
ခင်ဗျားပြောတဲ့ နအဖရဲ့ တိုက်ကွက်ကို မမြင်ဖြစ်ပြီးလို့ ပြောနေတော့.. သူတို့ တိုက်ကွက်ကို အကျယ်ချဲ့ ရှင်းပြပေးစေလိုပါတယ်.. ကျုပ်တောင်းဆိုတာက ဒီဦးနောက်ထွက်တာနဲ့ ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး။ ခင်ဗျားဆိုလိုတာ အချို့ ဖတ်ရတာ.. မရှင်းလို့ ပါ..
It's possible to beat the brain out. Perhap, the victim wasakid.
lightofmyanmar မင်းရေးထားတဲ့ လိမ်ညာဝါဒဖြန့်ချီခြင်းသည်အကျိုးမရှိပါ ကဟာကိုဖတ်ပြီးငါစဉ်းစားခဲ့ဖူးတယ်.အဖြစ်မှန်ဆိုတာအချိန်တန်ရင်ပေါ်လာတာပဲလေ မင်းဒီမေးမြန်းချက်ကိုဖတ်ကြည်ပါ http://burmese.dvb.no/news.php?
အရင်က လိမ်ညာတဲ့အကြောင်း အမှန်အတိုင်း ၀န်ခံ၇မှာ သတ္တိမရှိဘူးဆိုတာ သိသာပါတယ်။ တိတ်တိတ်လေးနေတဲ့ သူတွေဟာ အခုတော့ DVB လိမ်ညာထောက်ပံ့ သတင်းလေးတွေ့ရတော့ ၀မ်းသာသွားပုံရတယ်ဗျ။ ကျနော်ကတော့ အစ်ကိုတို့တော်လှန်ရေးကို ခေါင်းမရှိသူများရဲ့ တော်လှန်ရေးလို့ အမည်ပေးရမလိုဖြစ်နေပြီထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ နည်းနည်းလေးမှကို မစဉ်းစားပဲ ယုံကျတာတော့ အံ့သြပါတယ်ခင်ဗျာ။ အမှန်အတိုင်း ပြောမိလို့ စိတ်တော့ မဆိုးကျပါနဲ့ ခင်ဗျာ။ ကဲကျနော် အချက် ၄ချက်တင်ပြမယ်
(၁) ဓါတ်ပုံမှာ အရိုက်ခံရလို့ဆိုတာ အသေချာရေးထားပါတယ်။ စာကို သေချာပြန်ဖတ်ပါခင်ဗျာ။ ပစ်လို့အခုလိုဖြစ်တယ်ဆိုရင် ပစ်လို့ ဖြစ်တဲ့အကြောင်း ရေးမှာပါ။ တစိပ်ကို တအိတ် လုပ်ချင်နေတဲ့ သူတွေဆိုတာ အစ်ကိုတို့ ကိုယ်တိုင်သိပါတယ်။
(၂) အဲဒီသတင်းစာသားတွေ ပြန်ကြည့်ပါ။ အားလုံး အခုသတင်းကို မှန်ကန်တယ်ထင်အောင် စာသားစီထားပါတယ်။ ဥာဏ်ရှိသူများ မြင်နိုင်ပါတယ်။ http://burmese.dvb.no/news.php?id=2498
(၃)သေနတ်နဲ့ထိလို့ပေါက်သွားတဲ့ခေါင်းက ဦးနောက် အခုလိုဖြစ်နိုင်လား တချက်ပြန်စဉ်းစားပါခင်ဗျာ။ ဓါတ်ပုံ ပြန်ကြည့်ပါ။
(၄) နောက်ဆုံးမေးချင်တာကတော့ တယ်လီဖုံး အင်တာဗျူးတွေကို အမြဲယုံလား?
အမှန်ကို အမှန်အတိုင်းလက်ခံ နိုင်အောင် ကြိုးစားပါခင်ဗျာ။ ကလေးမဆန်ပါနဲ့ ခင်ဗျာ။ စဉ်းစားပါခင်ဗျာ။ တွေးခေါ်ပါခင်ဗျာ။ ခေါင်းမရှိသူများရဲ့ တော်လှန်ရေးကြီးဖြစ်နေရင် . . . . . . . . .
(မှတ်ချက်။ ။ ကျနော်၏ တုံ့ပြန်ချက်ဟာ စဉ်းစား ဥာဏ်ရှိသူများ အတွက်သာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးများနဲ့ Brainwashed လုပ်ခံထားရသူများ အတွက်မဟုတ်ပါ)
ဟုတ်ပါတယ်။ ဒီလိုသတင်း မှားသလားမှန်သလားဆိုတာ ကယံကံရှင်တွေသာလျှင် အသိဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ သတင်းအမှန်ကို (ထုတ်လွင့်မပေးရ)မူဝါဒလမ်းစဉ်နဲ့ အညီဖော်ပြပေး ထားတာဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
လက်တွေ့ကျကျ ပြောကျမယ် . . . နအဖ ပြုတ်ကျမလား ?
ရှေးမူမပျက် လုပ်ဆောင် သွားမှာလား?